lundi, 27 janvier 2020 20:18
Toamasina Suburbaine: Vita ny famindram-pitantanana ny Kaominina
Tontosa androany maraina ny famindram-pitantanana teo amin'ny Ben'ny tanàna vaovao, Barisaonina Charles sy ny teo aloha, Razafindramosa Nicaise tao amin’ny Kaominina Toamasina suburbaine.
lundi, 27 janvier 2020 10:28
Mahajanga: Niverina tsikelikely an-tsekoly ny mpianatra
Miverina manomboka androany alatsinainy 27 janoary ny fampianarana amin’ny ankamaroan’ny sekoly eto Mahajanga, raha niato vonjimaika nandritra ny andro ratsy namely ny Faritra Boeny, ka naha traboina mponina maro. Misy ihany ny toromarika fa izay sekoly mbola misy traboina dia tsy mianatra. Mbola hamendrahana fanafody ihany koa ny sekoly vao azo idirana.
Mihombo ny fahavoazana nateraky ny andro ratsy nitondra oram-be niteraka tondradrano tamin’ny faritra maro. Raha ny tatitra vonjimaika navoakan’ny BNGRC io hariva io dia 32 ireo namoy ny ainy, 10 tsy hita popoka ary 116 675 ireo traboina. Nahitana faty iray tao Marovoay androany alahady tolakandro rehefa nihena ny rano. Miisa 14 103 ireo trano dobo rano ary 1517 ny trano nirodana.
Nanapa-kevitra ny Governoran’ny Faritra Matsiatra Ambony fa haato vonjimaika ny fanatanterahana ny Voin-kava mahatratra, izay notanterahina teo amin'ny Faritra sy tany amin'ny toerana hafa, ho fanomezana tolo-tànana ho an'ireo Faritra niharam-boina noho ny andro ratsy, noho ny fandraràna nataon’ny Minisiteran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny tsy hanaovana «Téléthon ». Tao anatin’ny roa andro nanombohan’ny Faritra Matsiatra Ambony dia nahatratra 568 200 Ariary ny vola voaangona ary dia hatolotra amin'ny anaran'ny vahoakan'i Mahatsiatra Ambony ho an'ireo Faritra niharam-boina ho mariky ny firaisam-po amin'izy ireo.
Mavesatra ny fahavoazana nateraky ny andro ratsy nitondra rotsak’orana niteraka tondradrano sy nahasimbana fotodrafitrasa maro nanomboka tamin’ny 19 janoary teo. Raha ny tatitra vonjimaika nataon’ny BNGRC ny fiafaran’ny tolakandro teo dia tafakatra 31 ny isan’ny olona namoy ny ainy, ka tao amin’ny Distrikan’i Mitsinjo ny 14 amin’ireo ary tao amin’ny Distrikan’i Maevatanana ny 9. Miisa 9 hatreto ny olona tsy hita popoka ary 106 846 ireo traboina. Efitranon-tsekoly miisa 67 no potika tanteraka, 28 hafa nisy fahasimbana. Miisa 18 ireo sekoly nampiantranoana ireo traboina. Manodidina ny 6 600 ireo ankizy tsy afa-mianatra.
Tanàna maromaro no misedra olana amin'ny famokarana herinaratra vokatry ny andro ratsy izay mampananosarotra ny fivezivezen'ny kamiao mpamatsy solika noho ny lalana ratsy na tapaka mihitsy. Ritra ny tahirin-tsolika ao amin’ny foibe famokarana herinaratra any Morafenobe Faritra Melaky, ka tapaka tanteraka ny herinaratra noho ny fiara mitondra solika mikatso anaty lalan-dratsy. Mety ho ny fiandohan’ny herinandro iny vao ho tonga any an-toerana ny solika. Tanàna maro toa an’i Soalala, Besalampy, Andilamena, Ambatondrazaka, Ambatomainty, Tsaratanana, Bealanana, Analalava, Mampikony ary Mandritsara no voatery mampihatra fanapahan-jiro mifandimby vokatry ny fahatapahan'ny lalam-pirenena ka miteraka fahataran'ny famatsiana solika.
Nitondra fanampiana ho an’ireo faritra miisa fito, izay lasibatry ny rano be vokatry ny andro ratsy iny, ny Ministeran’ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy, amin’ny maha mpiahy ny mponina azy voalohany. Nanatitra vary 4 taonina, miampy akanjo 2 fatorana, ho an’ireo traboina teny amin’ny biraon’ny BNGRC Antanimora, ny ministera, androany sabotsy 25 janoary. Tonga teny an-toerana nanolotra izany ny Minisitry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy Naharimamy Lucien Irmah, nanao ohatra hitarika an’ireo malala-tanana. (Jereo Sary Tohiny)
Distrika isan’ny nitondra takaitra vokatry ny fandalovan’ny andro ratsy farany teo Ambatoboeny. Potika ny fambolena toy ny vary, katsaka,voanjo. Maro ny biby fiompy lasan'ny rano. Tapaka ny tetezana eo anelanelan'i Soaniaviana sy Ankijabe. Simba ny lalam-pirenena faha-33 bis. « Vonjeo Ambatoboeny Tompoko », hoy Rakoto Jean Valérien, Ben’ny tanànan’Ambatoboeny. Miantso ny Filoha sy ny Governemanta ity farany « ho tonga sy hitondra vahaolana, fa indrindra ny sakafo sy ny fanafody ». (Jereo Sary Tohiny)
Lasibatry ny mpangalatra ny taribian-jiron'ny Jirama mirefy 4 km teny Andranovao Ambohimangakely, Distrika Antananarivo Avaradrano, ka niteraka fahatapahan'ny herinaratra nanomboka ny Alakamisy lasa teo. Mbola niampy 120 m indray izany halatra izany androany maraina raha mbola an-dalam-pikarakarana ny fanoloana io taribian-jiro io ny Jirama.
Raha ny antontan'isa vonjimaika navoakan’ny BNGRC omaly hariva, vokatr'ilay andro ratsy nitondra rotsak'orana betsaka, ka namela takaitra tamin’ny faritra maro teto Madagasikara, dia mahatratra 92 583 ireo traboina ,26 no maty , 15 tsy hita popoka. 12 311 ireo olona voatery nafindra teorana, 10 659 ireo trano dibo-drano , 7 ny trano nahitana fahasimbana ,146 ireo trano rava. (Jereo Sary Tohiny)